Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Ebe Nkume akpụkpọ ụkwụ: afọ iri nke chere Caribbean ihu
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Caribbean • Akụkọ Curacao • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Sandals Foundation na -enyere ndị Caribbean aka
Afọ a bụ akara afọ iri nke Sandals Foundation, ogwe aka nke Sandals na Resorts Resorts. N'ime afọ iri gara aga, akpụkpọ ụkwụ agbaala mbọ ike imetụta ndụ ihe karịrị mmadụ 10 n'ofe Caribbean.
Sandals Resorts International ewerela ọtụtụ ihe ekwesịrị ime na agwaetiti ebe ọ na -arụ ọrụ.
Ọ bụghị naanị maka ịnakọta na imefu ego ka akpụkpọ ụkwụ na -ejikwa agụụ, ume, nka na ike akara.
Sandals Foundation na -edozi okwu lekwasịrị anya n'isi atọ sara mbara - agụmakwụkwọ, obodo na gburugburu.
Sandals Resorts na -agba mbọ itinye ego nke na -emepụta mmetụta dị mma na adigide n'agwaetiti ndị ọ kpọrọ ụlọ. Site na Sandals Foundation, Sandals Resorts International na -enyere aka ị nweta ọtụtụ ihe ekwesịrị ime na agwaetiti ebe ọ na -arụ ọrụ site na ime ka Caribbean bụrụ ihe kacha mma ọ nwere ike ịbụ. Ọ bụghị naanị n'ịchịkọta na imefu ego. Akpụkpọ ụkwụ na -ejikwa agụụ ya, ume ya, nka ya, na ike akara iji dozie okwu lekwasịrị anya n'isiokwu atọ sara mbara - agụmakwụkwọ, obodo na gburugburu.
The Akpụkpọ ụkwụ Sandals na -enye ma ụmụaka ma ndị okenye akụrụngwa dị mkpa dị ka agụmakwụkwọ, akụrụngwa, teknụzụ, mmemme mmuta, ndụmọdụ, na ọzụzụ ndị nkuzi, iji nyere ha aka iru ike ha. Ka ọ dị ugbu a, e nyela ihe dị ka kilogram 59,036 na ụlọ akwụkwọ 578 nwere mmetụta dị mma, gụnyere kọmpụta 2,506 nyere; E nyere akwụkwọ 274,517; Ụmụ akwụkwọ 169,079 metụtara; 2,455 ndị ​​nkuzi zụrụ azụ; na 180 scholarships nyere.
Na Sandals Foundation, a na-emepụta atụmatụ ma na-akwado nke na-etinye ma na-akpali ndị mmadụ site na ọzụzụ nka yana na-edozi nsogbu mmekọrịta ọha na eze siri ike iji wee wusie obodo ike. Enwere ndị otu obodo 384,626 metụtara nke ọma gụnyere mmadụ 248,714 site na atụmatụ ahụike; 243,127 Nnukwu Ọdịdị! Inc. eze + ndị ọrịa iCARE, ihe egwuregwu ụmụaka 102,150 nyere; 4,218 nwamba na nkịta spayed na neutered; na ụmụ ọhụrụ 397 na-enweta ohere ịlụ ọgụ site n'enyemaka nke Foundation nke ndị ọrụ afọ ofufo 24,215.
Dị ka akpụkpọ ụkwụ, ha na -ekwe nkwa iwulite mmata gburugburu ebe obibi, zụlite usoro nchekwa dị mma, ma kuziere ọgbọ na -abịa n'ihu ilekọta obodo ha na ichekwa gburugburu ha. N'ihi akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, mmata gburugburu ebe obibi ruru 43,871 ebe a kụrụ osisi 12,565; Nnụnụ mbe 83,304 enweghị nsogbu; A kụrụ iberibe coral 6,000; 37,092 pound nke ihe mkpofu anakọtara; na ebe nsọ mmiri 6 na -enweta nkwado site na Sandals Foundation.
Onyinye niile, ma ọ bụ ego, ọrụ, ma ọ bụ n'ụdị, 100% na-aga ozugbo iji kwado mmemme na atụmatụ ntọala akpụkpọ ụkwụ nke na-eme mgbanwe na-adịgide adịgide maka ndị mmadụ na ebe ndị Caribbean.
Sandals Foundation na -achọ inye aka mezuo nkwa o kwere ndị obodo Caribbean iji meziwanye ndụ ndị mmadụ na ichekwa gburugburu ebe obibi site na itinye ego na ọrụ na -adigide na agụmakwụkwọ, gburugburu ebe obibi na obodo.
Ndị mba ọzọ nwere ọgwụ mgbochi ọ bụla nwere ike banye US malite ...